Jose Mourinho sanadkan way nagu filantahay inaan kagalno Premier league kaalinta labaad | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Jose Mourinho sanadkan way nagu filantahay inaan kagalno Premier league kaalinta labaad
Ciyaaraha adag ee laga ciyaaro horyaalka England waxaa ay xitaa lumisay kalsoonida hadalka ee tababare Jose Mourinho kadib sanadkii hore oo kooxdiisa uu u rajeeyay kaalin aan fiicneen taas oo noqotayna mid dhacday.
Jose Mourinho hadana sanadkan waxaa uu sheegay in kooxdiisa xitaa ay ku filantahay iney ka gasho Premier league kaalinta labaad xili uu suuqa kala iibsiga ku bixiyay £75million hadana ma rumeysno in wax walba fudeed lagu heli karo.
Mourinho ayaa sanadkii hore Arsene Wenger ku eedeeyay inuu taqasus u leeyahay guuldarada kadib wenger ayaa sagaalsano kadib soo afjaray abaartii dheereed markaas oo Arsenal uu la qaaday FA Cup.
Macalinka Portugal ayaa muujiyay dareen xun waxaana uu sheegay in horyaalka England uu yahay kan kaliya ee ugu weyn dunida kuna tartamayaan afar ilaa shan koox.
“kaliya mid uun ayaa ku guuleysanaya horyaalka,hadii booska koowaad koox ay nagaga guuleysato inagoo wanaagsan taas waa kubada cagta,waxaan dareensanahay inaan kamid nahay tartamayaasha koobka ayuu yiri
Mou ayaa laga burin doonaa shaqada Chelsea hadii kaalin muuqata uu sanadkan qaadan waayo.